भाइरस Url मला: व्यवहार कसरी गर्ने?
त्यसैले आज हामी विषय बाहिर आंकडा प्रयास गर्नेछौं: "Url मला? कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा संक्रमण व्यवहार गर्न"। आधुनिक भाइरस किनभने - यो एक धेरै मुश्किल र छली "सिर्जना।" छ का एकै समयमा, के यो नै कसरी प्रकट र कहाँ यो सिस्टम मा प्रवेश गर्न सकिन्छ, स्पाम यस प्रकारको गठन हेरौं।
तर तपाईं विभिन्न Trojans को तपाईंको कम्प्युटर छुटकारा गर्ने बारे विस्तृत थप कुरा अघि, अझ राम्ररी हाम्रो आजको समस्या हेर्न। आखिर, यसले हामीलाई के बाहिर आंकडा गर्न मद्दत गर्नेछ।
Url मेल - भाइरस कहिलेकाहीं भनिन्छ कि ट्रोजन। आफूलाई सबै उहाँले सबै वेब पृष्ठहरूमा ब्यानर विज्ञापन धेरै प्रदर्शन विशेष nadstroyschik ब्राउजर छ। मान्छे, यी कुराहरू चोर भनिन्छ।
सामान्य मा, तपाईं के भने Url मला संक्रमण, कसरी उपचार गर्न - तपाईं, त्यसपछि तुरुन्तै कुरा सोच्न थाहा छैन। को अपहरणकर्ताहरूलाई पछि अक्सर तपाईं विभिन्न वेबसाइटहरूमा प्रवेश कि पासवर्ड र प्रयोगकर्ता नाम चोरी। छैन सबै भन्दा राम्रो विकल्प, तपाईं इलेक्ट्रनिक पर्स एक उत्सुक प्रयोगकर्ता छन्, विशेष गरी यदि। तर पहिलो, जहाँ यो संक्रमण लाग्न सक्छ हेरौं। यो देखिन्छ हावा बाहिर छैन रूपमा!
हामी प्रश्न सम्बोधन अघि: "? Url मला - कम्प्युटर कसरी व्यवहार गर्न", तपाईं एक कण्टक पकड गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ कुरा हो। यो संक्रमण रोक्न बरु पछि भन्दा यो व्यवहार गर्न सजिलो सधैं छ। त्यसैले हामी के के बाहिर आंकडा प्रयास गर्नुहोस्।
त्यसैले, पहिलो परिदृश्य - शंकास्पद लिंक वा ब्यानर विज्ञापन मा एक संक्रमण। यो अपरेटिङ सिस्टम मा धेरै गहिरो रजस्टर छ संक्रमण केही दयालु, हुन्छ कम्प्युटर मा यो समयमा अक्सर छ। यो सामान ट्रयाक राख्न धेरै, धेरै गाह्रो छ। केही साइटहरू भ्रमण गर्दा यति सावधान।
अक्सर भाइरस को सबै किसिमका टिप्न जहाँ अर्को ठाउँ - यो लोडर (वा daunloudery)। सँगै कुनै पनि आवश्यक फाइल संग, तिनीहरूले एक ट्रोजन, वा प्रणाली प्रयोगकर्ताको ज्ञान बिना स्थापित छ जो स्पाम, कम्प्युटर मा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। जब संक्रमण संकेत पहिले नै सबै संग बढ्तै छन् - धेरै लेट संक्रमित लगािन्छ।
एकदम अक्सर संक्रमण स्रोत छ तेस्रो स्थान, - एक संदिग्ध कार्यक्रम वा सामग्री पटाखे। तपाईं विशेष गरी धेरै महंगा, किन्न आवश्यक छन् भनेर वास्तवमा "तोड्न" निर्णय भने, यो requisite सफ्टवेयर संग, तपाईं विभिन्न संक्रमण को एक पूरी गुच्छा मा कोड सिकाउन, सम्भावना छ। यस्तो सामग्री प्रयोग गर्दा सावधान रहनुहोस्।
यसलाई स्पाम इमेलहरू छ - छ कि र सिस्टम संक्रमित गर्न खोज्छ अर्को ठाउँ। तपाईं हुलाक कार्यालय आउन भने मानिस (वा एक साथीबाट) शंकास्पद फाइल वा लिंक समावेश, त्यसपछि हामी सामग्रीहरू ठूलो हेरविचार संग राख्न तपाईं पराई को कुरा हो। तपाईं थिए कुनै पनि अक्षर राखेका छैन? त्यसपछि तिनीहरूलाई मेटाउन - पनि खुला छैन। एकदम अक्सर यो पहिले नै पर्याप्त छ। कि प्रश्नको जवाफ भाग हो: "? Url मला - कसरी व्यवहार गर्न", र संक्रमण सञ्चालन प्रणाली देखिन्छ कसरी।
हामी प्रदर्शन हेर्न
अब हामी हाम्रो वर्तमान संक्रमण को सर्वाधिक लोकप्रिय सुविधाहरू भाइरस द्वारा छलफल गरिनेछ। साँच्चै, कहिलेकाहीं यो पत्ता लगाउन र भाइरस neutralize यो प्रणाली केही साँच्चै गम्भीर क्षति पहिले समय हुन सक्छ यी साना संकेत लागि हो।
आफ्नो कम्प्युटर अचानक र inexplicably छ भने सुस्त गर्न थाले, - "कसरी संक्रमण उपचार गर्न Url मला?": त, यो आवश्यक प्रश्न चिन्तन छ। कि धेरै संग। प्रणाली पहिले5सेकेन्ड भित्र बुट गर्न भने, यो केही मिनेटमा भइरहेको छ। हामी यस्तै व्यवहार याद? अलार्म हिट!
दोस्रो परिदृश्य - यो तपाईं स्थापित गरेको प्रणाली मा सामग्रीको उपस्थिति छ। डाउनलोड या तपाईं एक ट्रेलर केही कार्यक्रम स्थापित कुनै पनि फाइल चलिरहेको पछि भने, यो संक्रमण स्पष्ट चिन्ह हो। कुनै परिस्थितिमा तपाईं यी अनुप्रयोगहरू चलाउन प्रयास गर्नुपर्छ।
साथै, एकदम अक्सर Url मला भाइरस तपाईंको कम्प्युटर को प्रक्रिया मा देखिन्छ। यो सबै, यो नै नाम को एउटा विवरण, वा केही अबोध्य inscriptions / वर्ण संग हुन सक्छ। यी प्रक्रियाहरू अक्सर नक्कल गर्दै छन्, तर अझै पनि तपाईँको CPU स्मृति एकदम धेरै रकम कब्जा। तपाईं जस्तो कुरा नोटिस? "- तपाईं समस्या छ भने, एक व्यवहार रूपमा Url मला?": त्यसपछि बरु प्रश्न को परीक्षा गर्न अगाडि बढ्नुहोस्।
लडाइँ कसरी सुरु गर्ने? निस्सन्देह, खराब सफ्टवेयर लागि आफ्नो कम्प्युटर को एक स्क्यान संग। त्यसैले गरेको कसरी राम्रो गर्न हेर्न दिनुहोस्।
तपाईं प्रश्न बारे सोच छ भने: "? Url मला - कसरी व्यवहार गर्न", यस कठिन मामला मा Avast वा Dr.Web मद्दत। अर्को शब्दमा, तपाईं पनि सबैभन्दा संसाधन किरा पत्ता लगाउन सक्ने एउटा राम्रो एन्टिभाइरस आवश्यक छ। तपाईं प्रस्तावित विकल्प चाहनुहुन्छ भने, Nod32 प्रयोग गर्नुहोस्।
क्रममा एक पटक र लागि सबै संक्रमण छुटकारा प्राप्त गर्नुहोस्, आफ्नो सिस्टम को एक गहिरो स्क्यान गर्न। त्यहाँ प्रक्रिया अन्त गर्न नआउञ्जेल एक समय प्रतीक्षा हुनेछ। परिणाम हेर्नुहोस्। पाइएको छ सबै, निको पार्न प्रयास गर्नुहोस्। जाने छैन? त्यसपछि यी फाइलहरू हटाउन र भाइरस लड्न जारी।
तपाईं विषय मा सोच रहे भने: "? Url मला - प्राप्त कसरी गर्न एक पटक र सबै को लागि छुटकारा", त्यसपछि तपाईँको कम्प्युटरमा स्थापित सामग्री सफा गर्न बिर्सनु हुँदैन। यो प्रमुख पूरा गर्न आवश्यक छ पीसी सफाई - तपाईं अब आवश्यक कुनै कुरा हटाउन।
यो गर्न, जाने "कन्ट्रोल प्यानल" र त्यसपछि "थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस् कार्यक्रममा।" तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि स्थापित progruz सामग्रीको पूर्ण सूची सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। अब तपाईं आवश्यक छैन भनेर सबै मेटाउन। (कि तपाईं अपरिचित छ) भाइरस स्थापित ती कार्यक्रम विशेष ध्यान। तपाईं समाप्त भएपछि, अन्तिम चरण मा सार्न।
को "भोज" को पूरा
ठीक छ, हामी केही सरल कदम गर्न सक्नुहुन्छ - र तपाईंले कम्प्युटर फेरि सुरु पठाउन सक्छन्। हामीलाई केही manipulations ब्राउजर हाम्रो काम निष्कर्षमा पुग्न गरौं।
पहिलो, हामी कार्यक्रम को शर्टकट को गुण जान आवश्यक छ। यो गर्न, प्रतिमा मा कर्सर सार्दा, दायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस्। अब रेखा "गुण" चयन गर्नुहोस्। एक विन्डो तपाईं को सामने खुल्नेछ।
यो तपाईं वस्तु "" ध्यान हुनेछ। अन्त गर्न यो स्क्रोल र यसलाई के भन्छ हेर्नुहोस्। को कार्यान्वयन फाइल (EXE) केही उद्धरण केहि (जस्तै आफ्नो होमपेज रूपमा) छ भने, त्यसपछि केवल कोष्ठकमा संग लेबल हटाउनुहोस्। तपाईंको परिवर्तन बचत र ब्राउजरमा जानुहोस्।
अब तपाईं कार्यक्रम सेटिङहरू जाने छ। यहाँ, "थप्न" चयन गर्नुहोस्। फेला पार्न र स्थापना AdBlocK नै - केही स्पाम ब्लक गर्न मद्दत गर्छ कि एक कार्यक्रम छ। तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि कम्प्युटर पुनः सुरु गर्नुहोस्। सबै छ। अब तपाईं प्रश्नको जवाफ थाहा: "Url मला - कसरी प्राप्त गर्न एक पटक र सबै को लागि छुटकारा?"।
"Avast": फाइल लाइसेन्स र चाबी। कसरी सही स्थापना गर्न?
भाइरस ब्लक इन्टरनेट: उपचार म्यानुअल
को "आईफोन 6" के हो? जब आईफोन6बाहिर आउँछ: समीक्षा, समीक्षा, मूल्य, फोटो
"कुलपति" म कसरी एउटा एल्बम मेट्न गर्छन्। सबै सामाजिक सञ्जाल मा एक फोटो एल्बम सिर्जना "VKontakte" बारे
आरक्षित - राज्य द्वारा सुरक्षित एक क्षेत्र
फ्रान्स आकर्षण: क्लरमन्ट-फेरान्ड शहर
VIN डीजल को "को ग्यालेक्सी को संरक्षक" मा खेलेका: नायक को विवरण
बिजुली परिपत्र देख्यो। विवरण